Abaalmarinta Caddaaladda - Malkalinta Agagixisada
Sanadkii 2002-da, waxay Dawladda Mareykanka soo saartay barnaamij abaalmarineed oo loo adeegsado in lagula dagaallamo maalgelinta argagixisada.
Argagixisada caalamka waxaa lagu maalgeliyaa lacagta ay argagixisada u soo diraan dad dunida ku nool. Waxay Dawladda Mareykanka haatan diyaar u tahay in ay bixiso lacag gaaraysa illaa $5 milyan haddii la helo macluumaad loo adeegsankaro kala furfuridda nidaamka lagu maalgeliyo ururrada argagixisada.
Si aad u eegto sawirka barnaamijkan loogu talagalay, waxaad fadlan xulataa sawirrada soo socda:
Dhamaan dokumentiyada bogga ku jira ee la degsan karo waa kuwa nooca PDF ah. Si aad u eegto dokumentiyada PDF ka ah waa in aad haystaa barnaamijka Adobe Acrobat Reader. Waxaad soo degsan kartaa nooc bilaash ah adiga oo tujiya xiriiriyaha hoose.